Caro ka dhaaltay filimkan ayaa rabshado ka kicisay caalamka oo dhan, iyadoo ay ku dhinteen in ka badan toddoba qof rasbashadaha arrintan ku saabsan ee ka dhacaya dunida muslimka, iyadoo rabshado ka dhacay dalka Liibiya lagu dilay safiirkii halkaas u joogay Mareykanka iyo saddex qof oo kale.
"Al-shabaab waxay ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan jacaylka ay u qabaan Islamaka, gaar ahaan Nebi Muxamed (NNKH), ayna weeraraan danaha reer galbeedka," ayuu yiri afhayeenka Al-shabaab, Sheekh Cali Dheere oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP.
"Weerarkan lagu qaaday Nebi Muxamed ma ahan oo keliya mid ay qabaan dadka sameeyay, balse waa mid ay qabaan xukuumada ka jira dalalka gaalada," ayuu ku daray hadalkiisa. "Tani waxay caddeynaysaa in diinta Islaamka aan la jeclayn."
Jimcihii shalay waxaa degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan oo ay ka taliso Al-shabaab ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo filimkan, iyadoo dadka ay aad ugu qaylinayeen inaan diinta Islaamka loo gefi karin.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale ka dhacay shalay dibadbax aan aad u xooganayn oo looga soo horjeedo filimkan, iyadoo dowladda Soomaaliya ay si adag u cambaareysay filimkaas, iyadoo ku tilmaantay inuu xadgudub ku hayay diinta iyo dadka muslimka ah oo dhan.